ငါဒါနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်: Netflix ကလာမည့်စီးရီးများအတွက်စာသားမျှဝေ - Netflix မူရင်း
Netflix ကသူစိမ်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများမှ“ ငါဒီနှင့်အတူအဆင်မပြေဘူး” ကိုလှောင်ပြောင်သည်
Netflix Teases I Am Not Okay With This
ဒီနည်းကိုငါအဆင်မပြေဘူး - Credit: Netflix
Castlevania ရာသီ ၃ သည်မတ်လ ၂၀၂ တွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည် Falcon နှင့် Winter Soldier သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်သြဂုတ်လတွင် Disney Plus သို့ရောက်ရှိလာသည်
ဒီရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Sophia Lillis နဲ့ Wyatt Oleff တို့ဟာ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ Netflix ဆီကိုလာနေပါပြီ။
Netflix ကအသစ်ထွက်လာမည့်မူရင်းစီးရီးအတွက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်နှင့်ကြော်ငြာနောက်တွဲများကိုမျှဝေလိုက်သည် ငါဒီနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်ဖြစ်၏ စီးရီးအသစ်သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။
ငါဒီနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်ဖြစ်၏ ပြင်ပရှိဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၂၀ တွင်ထွက်ပေါ်လာမည့် Netflix အသစ်ဖြန့်ချိမှုစာရင်းကိုကြည့်သည့်အခါစာမျက်နှာအတိအကျမဖော်ပြထားပါ Locke & Key၊ ငါဒါနဲ့အဆင်မပြေဘူး ယခုလ Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန် THE ပြပွဲနှင့်တူလှပါတယ်။
Netflix ၏မူလစီးရီးသည်ဆစ်ဒနီ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။ သူမကြီးပြင်းလာသည်။ သူမမိသားစု၏ရှုပ်ထွေးမှု၊ ရင့်ကျက်သောလိင်မှုနှင့်စူးရှသောအင်အားကြီးနိုင်ငံများအတွင်း၌နက်ရှိုင်းစွာနိုးထလာခြင်းစသည့်အထက်တန်းကျောင်းသူ Sophia Lillis ကကစားသည်။ , အရ Netflix ။
ဒီပြပွဲအတွက်ငါ့ကို sign up!
ဒီစီးရီးကနောက်ကွယ်မှကြယ်ပွင့်တွေအများကြီးပါ! Netflix ၏မူရင်းစီးရီးကို ၂၁ လက်ပ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဒါရိုက်တာ Shawn Levy ၏ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ သူစိမ်းများ။
သူစိမ်းများ ထုတ်လုပ်သူ Dan Cohen လည်းထုတ်လုပ်နေသည် ငါဒီနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး Netflix ၏အဆိုအရ Dan Levine နှင့် Josh Barry တို့နှင့်ကြာရှည်ခဲ့သည်။
Netflix ၏ဒါရိုက်တာ Jonathan Entwistle ကရိုက်သည် ကမ္ဘာ၏အဆုံး၊ Christy Hall နှင့်အတူစီးရီးကိုတွဲဖက်ဖန်တီးသူအဖြစ်စာရင်းသွင်းထားသည်။ ဒီစီးရီးဟာ Charles Forsman ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုအပေါ်မှာအခြေခံထားတယ် ကမ္ဘာကြီးကို ing F ကို၏အဆုံး။
ဒီစီးရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကငယ်ရွယ်တဲ့စွမ်းရည်အချို့လည်းရှိပါတယ်။ စီးရီးအတွက် Lillis နှင့် Wyatt Oleff ကြယ်။ သင်မှဤကြယ်အသိအမှတ်ပြုရန်ပါလိမ့်မယ် အိုင်တီ Lillis ကို Beverly Marsh အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသော Oleff သည် Stanley Uris ကိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့သောရုပ်ရှင်ကားများ။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ Oleff သည်ဤစီးရီးတွင်အခြားစတန်လီကိုပါဝင်သောစတန်လေဘာဘာ။
ကျနော်တို့အသစ်ကတိုယိုတာနောက်တွဲယာဉ်ထဲမှာအများကြီးတွေ့မြင်ရကြဘူး, ဒါကဒီဇိုင်းအားဖြင့်ဖွင့်, သင်တန်း, ဒီရုံတစ်ခုရယ်စရာဖြစ်ပါတယ်! ကျနော်တို့လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲမှအပြည့်အဝနောက်တွဲယာဉ်ရလိမ့်မယ်။
Netflix သည်မကြာသေးမီကမယုံနိုင်လောက်အောင်ဆယ်ကျော်သက်ပြပွဲများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရုံ၏ကြီးစွာသောဒုတိယရာသီကိုမြင်တော်မူ၏ လိင်ပညာရေး၊ နှင့် streaming များကွန်ယက်ကိုဤအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများနှင့်အတူတစ် ဦး အလွန်ကြီးစွာသော track record ရှိပါတယ်။ ငါထောက်ပြပါလိမ့်မယ် သူစိမ်းများ အကောင်းဆုံးဥပမာအဖြစ်။ ဒီပြပွဲနောက်ကွယ်မှတူညီသောလူအချို့ရှိသည်ပါဘူးမသာ သူစိမ်းများ အသင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်, သို့သော်ဆစ်ဒနီနှင့် Eleven အကြားအချို့တူညီလည်းသင်တန်းရှိပါတယ်။
Netflix မှအကျဉ်းချုပ်လေ့လာခြင်း၌ဆစ်ဒနီ၌လုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်။ ၎င်းသည်တီဗီကိုမကြည့်မီငါစီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအနုပညာကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါကဟေးရီရယ်၊ စီးရီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 26 ရက်နေ့တွင်ပြသရန်အခါငါတကယ်သူတွေကိုပိုပြီးမျှော်လင့်တယ်!
ဘယ်အချိန်မှာအရှက်မရှိသောရာသီသစ် netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
မင်းကြည့်နေမလား ငါဒီနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်ဖြစ်၏ Netflix ပေါ်မှာဒီလနှောင်းပိုင်းမှာလား
နောက်တစ်ခု:ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံး Netflix ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲများ
ဇာတ်နှင့်ခြောက်ယောက်ဇာတ်လမ်းတွဲ6စီး
Hulu သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဒိုင်ယာရီရာသီရှိပေ 7
ရာသီ5ပိုက်ဆံ heist ထွက်လာပါဘူး
ဘယ်အချိန်မှာမွေးမြူရေးခြံ၏ရာသီ2netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်